Dalladda SSE: Taageero Iyo Talo Soo Jeedin Ku Aaden Go’aanka Ay Somaliland Ka Qaadatay Arrimaha Ka Taagan Waddamada Khallijka | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Dalladda SSE: Taageero Iyo Talo Soo Jeedin Ku Aaden Go’aanka Ay Somaliland Ka Qaadatay Arrimaha Ka Taagan Waddamada Khallijka
Tixraac: SSE/DK 061/13062017
Taageero iyo talo soo jeedin ku aaden go’aanka ay somaliland ka qaadatay arimaha ka taagan wadamada khallijka .
Dalada guud ( SSE ) ee jaaliydaha yurub waxay taageero buuxda umuujinaysa go’aanka ay dawlad Jamhuriyada Somaliland ka qaadatay xasarada iyo xulafaysiga ka dhextaagan wadamada khaliijka, sidoo kalana waxay ka digaysa dhibaatooyinka ka imankara go’aankan, runtii waxa muuqata in Jamahuuriyada Somaliland ku saxsantahay mawqifkan ay qaadatay sababo badan awgeed , tusaale ahaan .
1- Waxaa cad in Qadar iyo xulafadeedu ( Somaliya , Turkiga ) lid kuu yihiin kana soo horjeeda qaranimada Jamhuriyada somalialnd, dhanka kale taa lidkeedana dawladaha hogaaminaya xulafada aynu inagu taageernay in aynu wadaagno dano gaar ah waqtigan xaadirka sida DP World- dekeda berbera iyo saldhig malatariba .
Go’aanku waa Ismuujin siyaasadeed haday tahay gobol ahaan iyo caalam ahaanba , waana ka qayb qaadashada dhaqdhaaqyada siyaasadeed ee mandaqada si somaliland u ahaato qaran firfircoon oo ka qaybqaadan kara giraamaha siyaasadeed ee mandaqada wareegaya.
In J.Somalialnd hesho xulufo iyo saaxiibo dhaw–maantana waaba fursad dublamaasiyaddeed oo dahab ah oo ay Somaaliland ka cayaari karto siyaasadda gobolka iyadoo ilaashanaysa danaheeda gaarka ah .
Maxaase halis ee ku jirta go’aankan amaba ka imankara ?
Ugu horeyn Qadar waa wadamada aduunka ugu qanisan amaba ugu hodonsan lacagteedana xasarad bay ku isticimaashaa, waxaaabana lagu haystaa in ay ururo aragagixiso maal galiso , hadaba mar hadii somaliland la safatay xulufada Emaaraatka waa in aay ku talagasha inuu dhico karo dagaal aan meel fog ka iman oo somaliland dadkeeda laysku jabin karo iyada oo loo isticimaalayo mabda’ diineed , mid dhaqaale , mid siyaasadeed . Waxa kale oo xusid mudan in dawlada Somaliland iyada oo si badheedh ah u muujisay go’aan ka dhan Qadar hadana ay dawlada somaliland cadaysay in aanay ka saareyn ururada samfalka ee Qadar iyada oo la ogayahay in ururdada aduunka ka jira intooda ugu badani ay fuliyaan danaha dalalkooda amaba yihiinba sirdoon.
Maxaa inala gudboon go’aanka ka dib ? Waxaa haboon in ay Somaliland wax wayn dhaafsato amaba ku iibsato go’aankan iyo taageerda ay gashay, ugu horay in somaliland hesho kaalmo amaba Somaliland caawimo ka dalbato xulafadeeda, haday tahay mid siyaasadeed, mid qalab iyo farsamo , mid dhaqaale iyo mid taagero cudud iyo sirdoonba leh , ugu horeyna waxaynu ku difaacno amaba ku ilaalino hawada aynu ka mabnuucnayn diyaarada Qadar .
Gunaanadkii ,dalad (SSE) ahaan waxaanu ku boorinayana kuna baraarujinaynaa dawlad iyo shiciba in laga feejignaado loona diyaargaroobo dhibkasta iyo saamaynkasta oo ka imankarta go’aanka adag ee aynu qaadanay ee ku aaden xasarada khaliijka .